I-Franchise Yezemfundo - Amathuba Wemfundo Yezemfundo | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»i-United Kingdom»Izikhungo Zezemfundo
Okufakiwe Kwezemfundo Franchise
IMfundo Yezemfundo yakamuva
Ama-franchise ezemfundo asephenduka umkhuba okhulayo emhlabeni wonke ngabazimele abangahle, hhayi ngenxa yenzuzo yabo.
I-90% yabantu abadala inezingane ezineminyaka yobudala engama-50 futhi konke kuzodinga imfundo ukuze ibalungiselele ukuba badala.
Kunamathuba amaningi wemfundo ehlukene yemfundo ekhona, futhi yini eyenza lo mkhakha we-franchising uthokozise ukuthi izinhlobo ezintsha zamaphrojekthi wezemfundo zakha njalo eminyakeni embalwa. Isibonelo, ama-coding franchise wekhompyutha afana neComputerXplorers. I-Coding Franchise ibingekho iminyaka elishumi eyedlule kepha intuthuko kwezobuchwepheshe iholele phambili emfundweni yakamuva yezingane.
Izinhlobo zeFundo Franchise
Kunezinhlobo eziningi kakhulu zemi-franchise yemfundo, nazi ezinye eziningi nje ezikhona ongazithenga namuhla.
Isifundo Franchise - ama-franchise amaningi okufundisa asebenza njenge-franchise yokuphatha, okusho ukuthi ngokwakho akudingeki ukuthi ufundise izingane. AmaFranchise ahlukahluka kepha amaningi azodinga ukuthi uqashe abasebenzi bokufundisa ekhaya ngemfundo yakho yendawo yangakini.
I-Computer Tuition Franchise - njengamaComputerXplorers ashiwo ngaphambili, ama-franchise wesifundo wekhompyutha afundisa izingane ngobuchwepheshe nesayensi yekhompyutha.
Ngemuva / Ngaphambi kwesikole Club Franchises - Abazali abasebenza phakathi nosuku kungenzeka bangatholakali lapho bezolanda izingane zabo ngemuva kwesikole. Ngemuva kwenkundla yamakilabhu ezikole asemalini ekhulayo ngenxa yalokhu. AmaFranchise anjengeManna-Seh Ukunakekelwa kwabantwana ukunakekelwa kwasemuva kwamaqembu wesikole nawamaholide. Izikhungo eziningi zokunakekela izingane zinikeza imfundo evimba ulwazi lwezingane ezikoleni.
Izikhungo Zemidlalo Yezemfundo - Kunama-franchise amaningi ezemidlalo ahlinzeka izingane ngamakilasi emisebenzi yokuzijabulisa ngaphandle kwesikole.
Akuwona wonke amafranchise afundisayo izingane. Uzothola ukuthi iningi lama-franchise emhlabeni jikelele nawo ayahlinzeka Imfundo yabadala.
Enye yezinzuzo ze-franchise yemfundo, ukuthi ibhizinisi lakho ngokwakho, kodwa hhayi ngokwakho. Ngokungafani nesiqalo sebhizinisi, i-franchise yezemfundo iyimodeli yebhizinisi efakazelwe neliphumelelayo eye yaphindwa yenziwa kuwo wonke ama-franchisees amaningi nezindawo zawo.
Kulula ukubona ukuthi kungani abaningi abazoba ama-franchisees betshala imali emfundweni yezemfundo. Dlulisa amehlo kumathuba ahlukahlukene wemfundo yezemfundo e-Franchiseek.